Taariikhda caloosha iyo caloosha, hiddeheeda iyo cuntooyinka caadiga ah | Safarka Absolut
Luis Martinez | | Hindiya
Taariikhda gastronomy ee Hindiya wuxuu ku bilaabmaa ceeryaamo waqtiga. Si kastaba ha noqotee, waxaan abuuri karnaa daqiiqad halyeey ah oo dhigeysa asalkeeda isla markiiba xikmad yadii Himalaya waxay ogaadeen dhir udgoon.
Halyeeygan maahan wax fudud, maxaa yeelay udgoonyadani had iyo jeer waxay leeyihiin a muhiimadda raasumaalka cunnada Hindida. Xaqiiqdii, waxay ka mid yihiin sababaha looga yaqaan adduunka oo dhan iyo sababta keentay mid ka mid ah waxyaabaha ugu badan ee lagu qiimeeyo caloosha meeraha. Haddii aad jeceshahay cunto karinta oo aad rabto inaad wax badan ka ogaato taariikhda gastronomy-ka Hindiya, waxaan kugu martiqaadeynaa inaad aqriso maqaalkeenna.
1 Taariikhda gastronomy-ka Hindiya: asal ahaan dhaqan ahaan
1.1 Asalka dhaqanka
1.2 Saamaynta shisheeye
1.3 Dhir udgoon, lagama maarmaan u ah taariikhda gaashanka Hindiya
2 Borotokoolka cuntada ee Hindiya
3 Qaar ka mid ah suxuunta caadiga ah ee Hindiya
3.1 Dal, misir Hindi ah
3.2 Chapati, rootiga Hindida ah ee muhiimka ah
3.3 Bariiska Pulau, oo ah saamayn reer Mongoliya ah oo ku saabsan taariikhda gaashanka Hindiya
3.4 Digaag Tandoori, nooc
3.5 Samosa, oo ah bilowga macaan
3.6 Raita, dheef-shiid oo qabow
3.7 Lassi, cab hal heer sare ah
Taariikhda gastronomy-ka Hindiya: asal ahaan dhaqan ahaan
Cunnooyinka Hindida, sida meel kasta oo kale, waa natiijada baahida loo qabo in la diyaariyo suxuun dhadhan u leh dadka cuntada cunaya. Laakiin marka lagu daro, waxay u badan tahay inuu asal ahaan ka soo jeedo a ujeeddo dhaqan, wax ka soocaya gaasriyada kale.
Runtii, cunnada Hindiga asal ahaan waxay lahaayeen a dabeecad muqadas ah. Macbudka dhexdiisa waxaa lagu diyaariyey suxuun loo soo bandhigay ilaahyada sida abaalmarin. Laakiin, waqtigaas, waxay u adeegi jireen cunto ahaan xujaajta. Sidaa awgeed, qaar badan oo ka mid ah ayaa loo aaneeyay bogsashada guryaha.
Xaqiiqdii, dhaqankani wali wuu socdaa. Cuntada la siiyo ilaahyada ayaa la yiraahdaa bhog waana lala sameeyaa oo keliya alaabooyinka si toos ah looga soo saaro dabiiciga. Ka heli maysid iyada oo laga shaqeeyay. Xitaa waxaa lagu kululeeyaa oo keliya warbaahinta si isku mid ah u dhacda sida jirridda geedaha ama qolofta qumbaha, gaas ama koronto la'aan.
Garam masala xawaash
Hindidu waxay muhiimad weyn siineysaa dhaqankan oo ah inuu cunto kariye macbudku bixiyo haybad weyn bulshada. Iyo sidoo kale, eedeyntu waa dhaxalka reeraha. Ku alla kii suxuunta diyajiyaa waa inuu marka hore maydhaa oo nadiifiyaa jikada.
Dhinaca kale, ilaah kasta oo Hindu ah wuxuu leeyahay saxankiisa la xiriira. Tusaale ahaan, Ganesha, oo caan ku ah madaxa maroodiga, xitaa wuxuu leeyahay mid u gaar ah munaasabadda gastronomic. Inta lagu jiro tan, baradhada waxaa lagu diyaariyaa maraqa yogurt iyo dhir udgoon oo la siiyaa ragga iyo, si sax ah, maroodiyaasha.
Markii Hindiya la gumeystay, caloosheeda waxay heshay saameyn shisheeye oo kala duwan. Laakiin waxay sii waday inay muqadas u ahaato Hindus. Waxaad ka heli kartaa fikrad tan haddii aan kuu sheegno in cuntada ugu horreysa ee ilmaha ay ku daboolan tahay a xaflad weyn, sida haddii ay ahayd baabtiiskaagii ama arooskii.
Cunnooyinka cunnada ee saameynta ku yeeshay caloosha caloosha Hindiya qarniyo badan waxaa ka mid ah Portuguese-ka, ka muslim, ka Faaris iyo ingiriisi inta badan. Natiija ahaan, gastronomy-ka Hindiya waxaa lagu gartaa iyada noocyo badan oo dhadhan ah, qaabab iyo midabbo, iyo waliba qiimaha weyn ee la saaray dhir udgoon, khudrad iyo bariis.
Dhir udgoon, lagama maarmaan u ah taariikhda gaashanka Hindiya
Waxaan horay u soo sheegnay maqaalkan oo dhan muhiimada dhir udgoon ee cunnada Hindida. Laakiin waa inay ka kooban yihiin astaamaha ugu caansan. Kuwa ugu badan ee la isticmaalo waxaa ka mid ah yamaarugga, kuum, sinjibiil, chili, rai ama iniin khardal le'eg iyo miridhka koryander. Laakiin sidoo kale cows, fenugreek, koryander, saffron iyo qufacdo ama dhirta asafoetida.
Hindidu waxay qiimo aad u badan siisaa dhir udgoon oo ay xitaa ka sameysmaan isku darka. Aad caan u ah waa waxa loogu yeero garam masala, oo ka kooban shan. Kuwani caadi ahaan waa qorfe, toon ah, lowska, basbaaska madow, iyo kaararka.
Laakiin uunsiga ugu caansan ayaa ah budada curry, taas oo lagu sameeyo iyadoo la shiidayo dhirta curry lafteeda iyada oo ay weheliyaan noocyo badan oo iyaga ka mid ah. Iyaguna waa la sameeyay curry maraqa. Kuwa ugu fiican ayaa ah marinade loo yaqaan vindaloo iyo in, la yaab leh, uu asal ahaan ka soo jeedo Boortaqiis. Waxay si siman caan ugu yihiin saag iyo madras.
Borotokoolka cuntada ee Hindiya
Waxaan kuu sheegaynay in dadka Hinduga ah ay qiimo weyn ku leeyihiin cuntada. Taasi waa sababta aysan la yaab kugu noqon karin inay ku weheliyaan wax kasta dhaqan. Suxuunta waxaa lagu qaadaa hal weel wixii ku jirana waxaa lagu qaataa gacanta midig, gaar ahaan afar farood, maadaama labada tilmaam ee gacantaas iyo bidixda bidixba loo tixgelinayo inay ku socdaan falal aan nadiif ahayn.
Sidoo kale, haddii qof gacan kaa siiyo isagoo gacantiisa ku jooga Hindiya, ha dhibsan. Waa a ixtiraam iyo martigelin. Isla macnahaas, haddii aad diiddo cuntada ay ku siiyaan, waxaad muujineysaa a aad u edeb daran wayna ka xumaan doonaan.
Qaar ka mid ah suxuunta caadiga ah ee Hindiya
Taariikhda gastronomy-ka Hindiya waxay ka tagtay cuntooyin badan oo caadi ah oo hadda adduunka oo dhan laga yaqaan. Suura gal ma aha inaan dhammaanteen adiga kugu soo qaadno. Sababta oo ah aag kasta oo ka mid ah dalka baaxadda weyn ayaa leh mid u gaar ah. Waxaan la heshiin doonaa, sidaa darteed, adiga oo kuu sheegaya qaar ka mid ah kuwa ugu badan caan ah oo dhadhan fiican leh.
Dal, Misir Hindi u eg
Dalku waa fuud digir Waxay ku kala duwan yihiin aagagga Hindiya. Si kastaba ha noqotee, guud ahaan dhammaantood waxay leeyihiin legume this, doorbidayaa qaabkeeda cas, iyo sinjibiil, diir iyo toon. Waxaa lagu siiyaa bariis iyo rooti.
Chapati, rootiga Hindida ah ee muhiimka ah
Dhab ahaan, rootiga Hindida ugu caansan waa chapati, oo lagu sameeyo nooc ka mid ah bur burka oo dhan wuxuuna leeyahay qaab la mid ah midkayaga keegga. Waxay kuxirantahay sida loo diyaariyay, waxay ku baxeysaa magacyo kala duwan. Sidaas darteed, ka naan Waxaa lagu sameeyaa foorno, guud ahaan lagu dhejiyaa derbiyada foornada. Dhinaca kale waxaa roti Waxaa lagu sameeyaa dubista iyo Puri la shiilay Dhinaca kale, waxaa parata Waa rooti ay ku jirto khudrad.
Bariis jasiirad, Saamayntii reer Mongolia ee taariikhda gastronomy-ka Hindiya
Bariiska waxaa lagu sameeyaa Hindiya kun siyaabood oo kala duwan. Laakiin tan ugu dhaqanka ayaa ah waxa loogu yeero bariiska jasiirad o pilau, oo lagu sameeyay khudaar, dabcan uunsi iyo Hilibka nooca Mangooliyaanka ah. Saameyntan isku mid ah waxay ka dhigan tahay in miraha lagu daro.
Pollo tandoori, qadiim ah
Cuntadani maahan oo kaliya dhaqanka Hindiya, laakiin sidoo kale waxay noqotay mid caan ku ah maqaayadaha Hindida ee Galbeedka. Waxaa sidoo kale loo samayn karaa siyaabo kala duwan, laakiin waa, qaabkeeda aasaasiga ah, digaag la kariyey oo la kariyey kaas oo lagu sameeyo foornada. Xaqiiqdii, magaceedu wuxuu ka yimid xaqiiqda ah in lagu kariyey foornooyinka tandoori, dhoobo laga sameeyay.
Samosa, Bilow macaan
Waa, laga yaabee, inay tahay saxanka ugu caansan ee Hindiya looga yaqaan adduunka intiisa kale, oo la mid ah waxa ku dhaca liiska guga ee Dufanka Shiinaha. Samosa waa daadin cufan baradhada, digirta, basasha iyo xawaashka. Si kastaba ha noqotee, waxaad sidoo kale ka heli kartaa khudaar kale ama digaag.
Raita, dheef-shiid kiimikaad cusboonaysiinta
Asal ahaan, waa a yogurt oo ay weheliso khudradda, gaar ahaan qajaar, iyo geedo udgoon. Si kastaba ha noqotee, waxaa sidoo kale jira kun sharraxaadyo kala duwan oo ku saabsan gastronomy Hindu.
lassie, cabitaan aan caadi ahayn
Hindusku aad bay u cabaan shaah caano. Laakiin sida caadiga ah weli waa laasii, sidoo kale laga sameeyay caano fadhi oo dareere ah oo lagu daro miraha sida mooska, cambe ama babaygu.
Gabagabadii, waxaan ku tusnay qayb wanaagsan oo ka mid ah taariikhda Gastronomy-ka Hindiya, iyo waliba kuwooda caadooyinka waqtiga qadada iyo qaar ka mid ah suxuunta caadiga ah. Hadda waxaad u baahan tahay oo keliya inaad go'aansato inaad tijaabiso. Kama qoomameyn doontid maadaama ay yihiin kuwo macaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Taariikhda Gastronomy-ka Hindiya